कृषिको व्यवसायिकरण कागज बनाएर धन्दा चलाउने अभियान मात्र हो – Krishionline
सरकारले पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोव्वर बनाउने भने पनि कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न किसानहरु लागि नभै नहुने सिंचाई सुविधा भने पुग्न सकेको छैन । सिंचाई सुविधा नै नभई कृषि उत्पादन बृद्धि गर्छु भन्नु उचित नहोला पनि । वर्तमान अवस्थामा नेपाली किसानहरुले सिंचाई सुविधा पाएका छन् कि छैनन यसै विषयमा राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघका महासचिव शम्भुप्रसाद दुलालसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गर्नु भएको कुराकानीको अंश :
० नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने सिंचाईको अवस्था के छ ?
नेपालको सिंचाई भनेको भगवान् भरोसा छ । पानी प¥यो भने किसानका खेतमा पानी पुग्छ नत्र पुग्दैन । सरकारी क्षेत्रबाट किसानका लागि गरिएका सिंचाई पर्याप्त छैन । किसानका लागि योजना नै छैन भन्दा फरक नहोला । स्थानीय तहले साना सिंचाई निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले मध्यस्तरीय सिंचाईको व्यवस्था गर्ने र संघले ठूला ठूला योजना बनाउने संविधनले व्यवस्था गरेको भएपनि तदनुरुप कार्य योजनाहरु नेपाली किसानहरुले कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
० विगत २ वर्षदेखि किसानहरुले सिंचाई सुविधा पाउन सकेका छैनन भन्नु भो तर सरकारले कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने कुरा गरिरहेको छ त?
व्यवसायिक कुन किसिमले भएको छ भने नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु, विद्यार्थी संगठनको झण्डा वोक्ने, किसान संगठनका झण्डा वोक्ने, मजदुर संगठनको झण्डा बोक्ने र विदेशी दातृनिकायले दिएको योजना बनाएर कागज बनाएर खाने धन्दा चलिरहेको छ त्यही हो व्यवसायिकता । तल्लो तहका बसेर आफ्न पुर्खाले बनाएका कुलाहरुबाट खेती गर्दै आईरहेका किसानहरुलाई न व्यवसायिकताको विषयमा थाहा छ न अनुदानका विषय । कृषि मन्त्रालय किसानको भन्दा पनि राजनीतिक तहको किसानका नाम लिएर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने किसानको काम नगर्ने मन्त्रालयका रुपमा परिभाषित हुँदै गईरहेको छ ।
० कृषि र सिंचाई मन्त्रालय नै फरक भएका कारण किसानहरुले सिंचाईको सुविधा पाउन सकेनन् भन्ने कुरा हो त ?
सिंचाई कृषिका लागि अभिन्न अंग हो । जमीन भिजाउनका लागि पानी महत्वपूर्ण छ । तर खेतीको पात्रो अनुसार पानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएकाले पनि कृषि मन्त्रालयको लागि नभै नहुने मन्त्रालयका रुपमा रहेको छ । तर सिंचाई मन्त्रालयले कृषिका लागि मात्र होइन, खानेपानी, विजुली उत्पादनदेखि सरसफाईसम्मका कुरालाई पनि हेर्नु पर्ने भएकाले फरक किसिमले हेरिनु पर्दछ र त्यही अनुसार राख्नु पनि पर्दछ ।
० हालका दिनसम्म पनि किसानहरुले सिंचाई सुविधा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा महासंघले के गरिरहेको छ त ?
हामीले विभिन्न मञ्चहरुमा किसानले सिंचाई सुविधा पाउनु पर्ने कुराको वकालत गरिरहेका छौ । किसानहरुलाई स्थानीय श्रोत र साधनकोप्रयोग बढी भन्दा बढी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको तालिमहरु प्रदान गरिरहेका छौ । सिंचाई मर्मत गर्ने काममा मात्र होइन किसानलाई सिंचाई सुविधान अनिवार्य पु¥याउनु पर्ने कुराको दवाव सिर्जना गर्ने काम पनि गरिरहेको छौं । कृषि विना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । त्यसका लागि सिचाईको विकल्प छैन । जवसम्म किसानहरुलाई सिंचाई सुविधान उपलब्ध गराउन सकिँदैन तवसम्म उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिँदैन भन्ने बोध गराउने काम हामीले गरिरहेका छौं ।
० त्यत्तिले मात्र पुग्ला त ?
पुग्दैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने किसानका लागि बाटो र सिंचाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । यी दुई चीज सरकारले किसानलाई नपु¥याउने हो भने सरकारले लिएको समृद्धिको बाटो पूरा हुँदैन । एउटा डाँडामा भएको घरका लागि करोडौं लगानी गरेर बाटो खनिन्छ तर सयौं रोपनी खेती योग्य जमीन भएको ठाउँमा कुलो बनाउनु पर्दछ भन्ने ध्यान कसैको पनि पुग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले समेत किसानका लागि नभै नहुने सिंचाईका लागि कलो निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छैन । हामीले झकझक्याउने काम गरिरहेका छौं ।
० तपाईको कामको अनुभवले भन्नुस् नेपाली किसानहरुले कहिले सहज रुपमा सिंचाईको सुविधा पाउलान् त ?
समस्या सिँचाई छ तर कस्तो ठाउँमा समस्या छ भने जहाँ सरकार छ त्यही समस्या छ । हामीसँग रहेका १८ हजार सिंचाई उपभोक्ता सदस्यहरुले नियमित रुपमा आफैले बलबुताले सिंचाई गरेर कृषि उत्पादन गरिरहेका छन् । कूल खेती योग्य भूमिको ३२ प्रतिशत भूमिमा मात्र सरकारले सिंचाईको सुविधा दिन सकेको छ तर पनि सतप्रतिशत खेतीमा उत्पादन भईरहेको छ । खेती भईरहेको ठाउँमा सिंचाईको कसरी पुग्यो भन्नु भो भने किसानहरुले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका कुला र आकाशे पानीको भरमा खेती गरिरहनु भएको छ । त्यहाँबाट किसानहरुले दुख गरेर उत्पादन गर्नु भएको कृषि उपजलाई कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो उत्पादन भनेर देखाईरहेको छ । ती सरकारले लगानी गरेर सिंचाई भएकै कारण उत्पादन भएका ठाउँहरु होइनन् । सरकारले सिंचाई सुविधा दिएको भनिएको ३२ प्रतिशत ठाउँहरुमा पनि जहाँ नहर बनाइएको ठाउँमा खेतीयोग्य जमीन छैन । खेतीयोग्य जमीन भएको ठाउँमा पानी र नहर सुविधा छैन ।
० किन त्यसरी बने त सिंचाई योजनाहरु ?
यो सवै कृषि विकास मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालयको द्वन्द्वले गर्दा हो । यसैका कारण नेपाली किसानहरु मारमा परिरहेका छन् ।
० कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा पनि करोडौंका सिंचाई आयोजना आएका थिएन नि त ?
त्यो कहाँ गयो भने, विधिवत रुपमा कार्यविधि बनाएर नियम संगत ढंगले किसानको नाममा बजेट खाने काम भएको छ । तर किसानका खेतसम्म त्यस्ता सुविधा पुगेको छैन । ती सिंचाई योजना कहाँ बने हामीले पनि सरकारलाई सोधिरहेका छौं । –वैकुण्ठ भण्डारी